Vaovao - Fanavaozana ny vokatra manoloana ny COVID-19
COVID-19 Na dia mahatsiravina aza, ny fotoanan'ny krizy nandritra ny taona maro dia namporisika ihany koa ny sasany amin'ireo zava-baovao malaza mbola ampiasaina ankehitriny. Avy amin'ny fiara mpamonjy voina noforonina nandritra ny Moyen Âge mba hanampiana ireo mpitsabo tonga sy hitaterana marary haingana, handefasana kasety mandritra ny Ady Lehibe Faharoa manampy ny miaramila hanamboatra fitaovana ao anaty paingotra iray, ary koa ny asan'i Isaac Newton amin'ny calculus sy gravité aloha raha 'miasa an-trano' mandritra ny Great. Ny areti-mandringana any Londres, ny valanaretina nasionaly sy manerantany no fototry ny vahaolana mamorona sy mamorona ny olana ankehitriny. Miaraka amin'ny fandrosoana vao haingana amin'ny fomba fanadiovana, ny solon'ny maska, ary ny fitaovana marobe hanakanana anao tsy hikasika sehatra hafa, voaporofo fa tsy misy hafa ny areti-mifindra coronavirus ankehitriny.
Iray amin'ireo zava-baovao niavaka indrindra hivoahana amin'ny areti-mifindra amin'izao fotoana izao ny fisaron-tava isan-karazany. Angamba natosiky ny tsy fisian'ny masony fanary sy N95 tany am-boalohany natolotray nandritra ny dingana voalohany, dia nahita fiakaran'ny mpamatsy an-trano sy ireo tarehy hafa azo nosasana sy azo ampiasaina indray manarona vahaolana izahay. Ny fanadihadiana vao haingana aza dia naneho ny sarontava vita amin'ny lamba vita an-trano namboarina ho mahomby kokoa noho ny saron-tava bandana na «cone-style» (toa ny N95) miaraka amin'ny vongan-drano mikitroka mirefy 2,5 santimetatra monja amin'ireo rakotra quilted, raha ampitahaina amin'ny 3 metatra sy 8 santimetatra tsirairay avy.
Miaraka amin'ny safidy hanaovana fonosana tarehy vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba namboarina, ny Soffio namboarina tamin'ny plastika namboarina, ary ireo safidy maro azo ampiasaina, ireo safidy safidy hafa noforonina taorian'ny fihanaky ny areti-mandringana dia vonona hanana fiatraikany maharitra eo amin'ny tontolo iainana ary hisy fiantraikany amin'ny fanivanana ho avy. ary ny teknikan'ny fanaovana sarontava .Ny mpamorona dia tonga tamin'ny famoronana hanampiana ny mpanjifany, ny ankamaroan'ireo trano fisotroana sy fisakafoanana, mangataka vahaolana mamorona sy azo ampiharina hanampiana ireo orinasa hisokatra indray.
Na fomba vaovao sy sariaka amin'ny tontolo iainana hamokarana vokatra, fitaovana nohatsaraina hampifandray antsika, na teknolojia vaovao toy ny pendant PULSE NASA izay mihetsiketsika rehefa manantona ny endrikao ny tananao, ny areti-mifindra coronavirus dia nanentana hevitra mamorona sy mamorona vaovao. Mahaliana ny mijery ireo fanavaozana ireo mivoatra sy mahita hoe iza no mety hivoatra amin'ny fiara mpamonjy voina na fantsona amin'ny ho avy.
Eye on Innovation dia fijerena teknolojia, vokatra ary fironana vaovao isam-bolana.